Maitiro ekutsvaga PDF | Nhau Gadgets
Laura Torres chinobata mufananidzo | 12/05/2022 11:21 | General, Software
Iwe unofanirwa kutsvaga izwi muPDF refu kwazvo asi iwe usingazive maitirwo azvo? Kanganwa maitiro ekutanga ekuzviita nemaoko, yekuenda peji nepeji kusvika wawana izwi, pane inokurumidza uye iri nyore nzira yekutsvaga PDF.
Nokudaro, munyaya ino tichatsanangura nhanho nhanho maitiro ekutsvaga iyo PDF nemuenzaniso kuitira kuti usanetseka kuwana mazwi mumafaira ane kuwedzera uku.
Kubva zvave fomu yakavhurika, magwaro ePDF ave akajairika nekuti chengetedza kuvimbika kwedhizaini yako zvisinei nemudziyo wainotarirwa pairi: komputa, smartphone, piritsi, nezvimwe.
Dzimwe nguva unofanirwa kutsvaga izwi mugwaro rePDF kuratidza chokwadi, kuwana ruzivo rwakakosha, kana nekuda kuziva. Sezvineiwo, uku ndiko kukurumidza uye nyore kushanda.
Kutsvaga mazwi muPDF, isu tichashandisa iyo yepamutemo Adobe application, iyo kambani yakagadzira iyo PDF fomati. Adobe Acrobat Reader DC chirongwa chemahara, chinosanganisira injini yekutsvaga inoshanda, uye zvakare iri muchiSpanish, izvo zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kwatiri.
1 Usati watanga: Dhawunirodha chirongwa
1.1 Nhanho yekutanga: Maitiro ekutsvaga PDF yeizwi kana mazwi.
1.2 Danho rechipiri: kunyanya kutsvaga
2 Tsvaga zvinyorwa mumagwaro akawanda ePDF
2.1 Tsvaga mumafaira akawanda kamwechete: matanho ekutevera
3 Ndingaongorora sei nekuchengetedza mibairo yekutsvaga?
Usati watanga: Dhawunirodha chirongwa
Kana iwe usina chero chirongwa chakaiswa chinoverenga PDF, unogona kudhawunirodha Acrobat Reader DC kubva pawebhusaiti yako. Ngwarira, nekuti nekusarudzika zvakare inorodha uye nekuisa iyo McAffee antivirus. Kana usiri kufarira, bvisa iyi sarudzo.
Kana iyo purogiramu yaiswa, enda ku menu Archive uye vhura iyo PDF kwaunoda kutsvaga. Kazhinji yenguva, nekuda kwekugadziriswa kwehurongwa, faira rinongovhura neAcrobat Reader DC paunodzvanya pagwaro.
Nhanho yekutanga: Maitiro ekutsvaga PDF yeizwi kana mazwi.
Tevere, iwe unofanirwa kuenda kune yepamusoro menyu Hora uye tinya pane iyo sarudzo kutsvaka pedyo nebhainokura chiratidzo. Imwe nzira inokurumidza ndeye kushandisa keyboard mirairo kana uchida:
dzvanya mirairo CTRL + F kana uri kushandisa Windows kana CMD + F kana uri kushandisa Mac.Hwindi rekutsvaga rinovhurika paunogona kunyora izwi rauri kuda kutsvaga. Kuti uyeuke murairo uyu, unogona kufunga nezveshoko rekutsvaga reChirungu: "wana", saka tsamba yekutanga yezwi ndiyo inofambidzana neCTRL.
Danho rechipiri: kunyanya kutsvaga
Kuti uwane rumwe ruzivo, dzvanya CTRL + Shift + F paWindows kana CMD + Shift + F paMac. Izvi zvichavhura iyo advanced search:
*"Shift" inoreva kiyi yaunoshandisa kunyora vara guru rimwe chete, rinosanganisira chiratidzo chemuseve wekumusoro. Kiyi iri pamusoro peCtrl.
Pano unogona kutsvaga magwaro ese ePDF mune chaiyo folda, kwete iyo yazvino folda. Unogona kutsvaga mazwi akazara, mabhukumaki, uye makomendi. Zvakare, pane bhokisi rekutarisa rekuratidza kana iwe uchida kuenzanisa mavara makuru nemadiki.
Tsvaga zvinyorwa mumagwaro akawanda ePDF
Acrobat Adobe PDF inoenderera mberi, unogona kutsvaga akawanda magwaro kamwechete!. Iwindo rekutsvaga rinokutendera kuti utsvage mazwi mumagwaro akawanda ePDF kamwechete. Semuenzaniso, unogona kutsvaga mapepa ese ePDF kana kuvhura maPDF Portfolio mune imwe nzvimbo. Iwe unofanirwa kufunga nezvekuti kana magwaro akavharidzirwa (matanho ekuchengetedza akashandiswa), haagone kuverengerwa mukutsvaga. Naizvozvo, uchafanirwa kuvhura magwaro aya rimwe nerimwe kutsvaga faira rega rega. Nekudaro, magwaro akavharidzirwa seAdobe Digital Editions anosiyana nemutemo uyu uye anogona kuverengerwa muboka remagwaro ekutsvaga. Mushure meizvi tinoenda ikoko.
Tsvaga mumafaira akawanda kamwechete: matanho ekutevera
Vhura Acrobat pane desktop (kwete muwebhu browser).
Ita chimwe chezviito zvinotevera.- Mubhara rekutsvaga, nyora mashoko auri kuda kutsvaga, wobva wasarudza Vhura tsvaga yakakwana yeAcrobat mune pop-up menyu.- mubhokisi rekutsvaga, nyora mashoko auri kuda kutsvaga.
Muhwindo iri, sarudza ese mapepa ePDF. Mune iyo pop-up menyu pazasi pesarudzo, sarudza tsvaga kupi.
Sarudza nzvimbo pakombuta yako kana pane network uye tinya kubvuma.
Kutsanangura mamwe maitiro ekutsvagatinya Ratidza sarudzo dzepamberi uye tsanangura nzira dzakakodzera.
Sechipi, panguva yekutsvaga, unogona kudzvanya pane zvabuda kana kushandisa keyboard mirairo kupuruzira mumhedzisiro pasina kukanganisa kutsvaga. Kana ukadzvanya bhatani Mira pasi pebhari yekufambira mberi, kutsvaga kwakadzimwa uye zvigumisiro zvinogumira kune zviitiko zvakawanikwa kusvika ikozvino. Iwindo rekutsvaga harivhare uye rondedzero yezvabuda haina kucheneswa. Naizvozvo, kuti uone mibairo yakawanda, unofanirwa kumhanya kutsvaga kutsva.
Ndingaongorora sei nekuchengetedza mibairo yekutsvaga?
Mushure mekuita tsvakiridzo kubva pahwindo rekutsvaga, mibairo inoratidzwa mukurongeka kwepeji, yakaunganidzwa pasi pezita regwaro rega rega rakatsvaga. Chinhu chega chega chiri muchirongwa chinosanganisira izwi remukati (kana richibvira) uye chiratidzo chinoratidza rudzi rwechiitiko.
Svetukira kune chimwe chiitiko mune zvekutsvaga. Inogona chete kuitwa mune yega maPDF.
-Wedzera mibairo yekutsvaga, kana zvichidikanwa. Wobva wasarudza muenzaniso mune zvabuda kuti uzvione muPDF.
-Kuona mamwe mamiriro, tinya pane imwe muenzaniso yemhedzisiro.
Ronga zviitiko mumibairo yekutsvaga. Sarudza menyu sarudzo Yakachena nepazasi pehwindo rekutsvaga. Iwe unogona kuronga zvawanikwa zvichienderana, zuva rakagadziridzwa, zita refaira, kana nzvimbo.
Sevha mibairo yekutsvaga. Unogona kuchengetedza mhinduro dzako sePDF kana CSV faira. A CSV file inogadzirwa netafura, saka kuti uivhure unofanirwa kuzviita neExcel program. Kuti upedze, tinya pane icon diskette uye sarudza kuchengetedza zvawanikwa sePDF kana kuchengetedza zvawanikwa seCSV.
Ndinovimba ruzivo urwu rwakabatsira kwauri, sezvauri kuona, kutsvaga mazwi muPDF ibasa riri nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Kutsvaga muPDF